Izikhala zeWarehouse ziyathengiswa futhi ziqashwa eKampala, eCentral Region
Uhlu Lwezakhiwo: Izakhiwo Zokuthengisa Zezebhizinisi Izikhala zempahla Isifunda Esiphakathi Kampala
A igumbi lokugcina impahla isakhiwo sentengiso sokugcina izimpahla. Amawashi asetshenziswa abakhiqizi, abangenisa impahla ezweni, abathunyelwa kwamanye amazwe, abathengisi bezitolo, amabhizinisi okuhamba, amasiko, njll. Ngokuvamile, bayizakhiwo ezinkulu ezihlala ezindaweni ezimboni emadolobheni, emadolobheni nasemadolobhaneni. Imvamisa inama-docks okulayishwa ukuthi alayishe futhi alayishe izimpahla emalolini. Kwesinye isikhathi izindawo zokugcina izimpahla zenzelwe ukulayisha nokuthumela izimpahla ngqo kusuka kojantshi, kwizikhumulo zezindiza noma emachwebeni. Imvamisa inamakhreyithi nemfoloko yezimpahla ezihambayo, ezivame ukufakwa kumapharaji ajwayelekile we-ISO alayishwe kuma-pallet racks. Izimpahla ezigciniwe zingafaka noma yiziphi izinto zokwakha, izinto zokupakisha, izinto zokuphumula, izakhi, noma izimpahla eziqediwe ezihambisana nezolimo, ukukhiqiza nokukhiqiza. Nge-English English indawo yokugcina impahla ingabizwa ngokuthi idolobha.